Malunga nathi -I-Shanghai P & Q yokukhanyisa Co., Ltd.
I-P & Q yezibane ze-P., Ltd.
I-Shanghai P & Q Lighting Co., Ltd. eyasungulwa ngo-2005 ngumenzi wokukhanyisa ngobuchule kwi-die-casting, inaliti yeplastiki kunye nesinyithi.
Ikhula ukusuka kwinto encinci iye kwenye enkulu iyeyayo yokuphosa kunye nefektri yomzi-mveliso eHaining inyathelo ngenyathelo. Die umatshini bephosa ukusuka kwiitoni ezingama-200 ~ 800tons. Siyaqhubeka nokutyala imali kwizixhobo ezitsha ukuze sijongane ngempumelelo nomceli mngeni wokuphuculwa okuqhubekayo, kwaye sihlala sibonelela ngezona zisombululo zifanelekileyo kuzo zonke iimfuno kubathengi bethu.
I-P & Q ayinayo inaliti yeplastiki kunye nomzi mveliso wesinyithi, kodwa inokubonelela ngenaliti yeplastiki kunye neephepha zentsimbi ngokweemfuno zabathengi.
Kwaye kungenxa yemigaqo esisiseko emithathu esihambelana nayo kuloo minyaka yobungcali kwizibane, ukuthembeka kubathengi, kunye noxanduva kuthi. Kungenxa yezi zinto, ngokuthe ngcembe siphumelela ukuthembela kwabaxumi bethu kwaye sisekwe intsebenziswano emnandi kunye nexesha elide kunye neenkampani ezithile ezaziwayo kwihlabathi liphela, ezinje ngeeBraums Australia, iPierlite, iGerard Lighting Group, iSYLVANIA, iLENA Lighting, i-LUG Light Factory njl.
Izixhobo zethu ezingundoqo lemveliso amazwe ngqo evela Taiwan.
Iinjineli ezinamava zinokunceda ukusombulula iingxaki ezahlukeneyo ngexesha loyilo kunye nenqanaba lokuvelisa.
Iimveliso eziveliswe kwi-P & Q ISO9001 yeefektri eziqinisekisiweyo zolawulo lomgangatho wokuqhubela phambili kwintlanganiso eMelika, e-Australia nakwimigangatho yaseYurophu.
Indibano yeP & Q Umzi-mveliso
Ukukhanya kwe-P & Q esekwe nguFrank Ji, umzi-mveliso ulala eSongjiang, eShanghai
I-P & Q isebenzisana nomvelisi omkhulu wokukhanyisa wase-Australia iGerard Lighting Group.
I-P & Q yokusebenzela i-casting ekwenziweyo. Umzimveliso we-ISO9001 uqinisekisiwe.
I-P & Q yokufa ikhupha kunye nefektri yokuhlanganisana iya e-Haining, eZhejiang,
Imveliso ye-P & Q kunye nolawulo oluqala ngokusekwe kwinkqubo ye-ERP.
Singabachwephesha kuyilo lokucheba izixhobo zokufa zokusika nokubumba kwamalungu. Esi sixhobo siphucula ukufana kwaye sivumela ukufezekisa iimfuno ezithandekayo ngaphandle kwesidingo sokusebenza ngakumbi.
Unyango oluthile lomphezulu ngokweemfuno kunye neenkqubo ezilandelayo.
Amagumbi okucoca amhlophe ngokunyakaza okungafunekiyo kunye nebhola yentsimbi yokudubula yenza ukuba kufezekiswe ukugqwesa okuphezulu komphezulu.
I-P & Q ilawula nayiphi na enye imisebenzi eceliweyo yokugqiba
(Ukutyabeka, ipolishi, njl.), Ngewaranti epheleleyo esemgangathweni kunye neziphumo zokugqibela.
Imisebenzi eyoyikisayo yokuba iqela lethu'ibe negalelo kubaxumi bethu!